बोइङ्ग जेट विमान र ट्रक जुध्दा आठ घाइते
लस एन्जलस (संयुक्त राज्य अमेरिका) । ब्यापारिक उडानमा रहेको एक विमान र यात्रुहरुलाई खाना, पानी आपूर्ति गर्ने एउटा ट्रक लस एन्जलस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी वेमा आपसमा जुध्दा आठ जना घाइते भएका छन् ।
विमानमा सवार एकसय चयालिस जना जति यात्रु र चालक दलका सदस्यमध्ये कसैलाई पनि केही भएको छैन । तर, बिमानको दायाँ पट्टिको पखेटा नराम्ररी क्षति भए तापनि इन्धन पोखिने वा आगलागीका कुनै पनि घटना हुन नपाएको समेत जनाइएको छ ।
गहिरो चुम्बनले पनि एचआईभी संक्रमणको जोखिम
पोर्नसाइट विश्वमा सबै भन्दा बढि कुन देशमा हेरिन्छ ?
गर्भावस्थामा यौनसम्पर्कलाई निरन्तरता दिन किन आवश्यक ?
बिचौलियाको स्वार्थमा वनमन्त्री : करोडौको काठ आयात गर्न स्वदेशी किसानको पेटमा 'छुरा'
'रुकुम हत्याकाण्ड'बारे माइतीघरमा गरिएको प्रर्दशनमा प्रहरीको लाठीचार्ज, ९ जना घाइते
रुकुम नरसंहारको विरोधमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुगे माइतीघर मण्डला
रुकुम घटना : राज्यसत्ता र दलित
आठ लाख ग्राहकलाई निशुल्क विजुली
आज १६६ जनामा कोरोना संक्रमण, जम्मा संक्रमित १५ सय ६७
सांसदहरुलाई एमसीसीजस्तो आपराधिक कार्यमा सहीछाप नगर्न विप्लवको आग्रह